Lehiben'ny nentim-paharazana, Pan-Africanism & Demaokrasia - Fondation Afrikhepri
Fifandraisana RAHARAHAM-BAOVAO BLACK
Vakiteny: 38 min
Mmanomboka amin'ny kaonty iray tantara velona izahay. Ity dia angano iray mametraka ny mekanisma hampitana ny fahefana amin'ny fanjakan'ny Fondjomekwet. Raha samy mahatsapa ho miharihary izy ireo na eo aza ny fitandremana goavana atao eto dia tsy azoko fehezina izany. Ary tsy manana fisalasalana aho fa ireo izay hahita ny tenany ho manan-tsiny hanala baraka ahy, dia hahatsapa ny avonavona miafina amin'ny maha-protagonista ny tantara iray izay mety ho ohatra iray amin'ny fihetsiketsehana (ho an'ny fandresen'ny soatoavina demokratika) ho an'ny Kemites sy ireo Pan-Afrikanista hafa izay, toa ahy, te-hamorona endrika manokana fanalefahana fahefana any Afrika. Raha afaka miseho ity lahatsoratra ity dia manohana indrindra ny fahalalahana mihetsika ao amin'ny firenentsika izany; satria ny namantsika any Chine sy any amin'ny firenena Arabo sasany dia voarara amin'ny fomba solosaina sy ara-dalàna.
Roa taona talohan'ny nahafatesany dia nitsidika ny raibeko aho, ilay Mpanjakany tao amin'ny Fondjomekwets. Nahazo ahy haingana tao amin'ny boaty tao amin'ny hotel Hila tao Douala aho. Zoma maraina iny. Nahita ny tontolo niandrasana aho dia tapa-kevitra ny handeha amin'ny zava-dehibe amin'ny alàlan'ny fomba fanajana mahazatra natokana ho an'ny mpanjaka: - Ohgiaha (fantatrao ve aho?) - Chisiele (mipetraha) hoy izy tamiko. Mba tsy hisintonana ny mpamaky dia handika ny ambangovangony amin'ny teny Frantsay aho. - Mpanjakan'ny firenena, tonga aho hisaotra anao nanangana ny reniko ho Mbeuh po Fo ô. Ity teny ity dia azo adika avy amin'ny Activator of Princes. - Toy izany? Hoy izy tamiko. - Mpanjakako, mankalaza anao aho. Hoy aho. Ny mpanjaka dia mpanjaka avokoa, izay tia azy sy izay tsy tia Azy. Hoy izy hoe. Tsapako fa ny filazana hoe "misaotra" dia ho famporisihana azy ary tsy afaka hanome ahy io fanomezana io izy. Notohizako: - Azoko antoka fa afaka mitia ilay omenao ho fanomezana ho an'ireo firenena aho. Fomba hangatahana ny taonanao, iza no handimby anao? Tsy miraharaha ny ady ara-diplaomatika ve ianao noho ny fifandimbiasan'ny lehibenao? Ny printsy rehetra dia mihevi-tena ho mpanjaka. Eo am-panajana no anaovana an'io saron-tava io. Ary andraikitry ny mpanelanelana ny mamaky izay lazaina fa afaka mamaly ny fanontaniana apetrak'io fanontaniana io. Hatramin'io fomba fijery io, ny raibeko dia mpanoro hevitra. Hoy izy tamiko: - Ilay mpanjaka amin'ny firenena, io no tsy hitady palaver satria efa ho mpanjaka izy. - Ka tantara gangster izany, hoy aho nieritreritra. Miverina mijery ny sehatra mampiroborobo aho. Ny andriambavilanitra tsy manan-tsahala indrindra dia efa nanana ny toerany, niforona tamin'ireo andriana izay nino ny tenany ho kely indrindra mba hifaninana ho an'ny mpanjaka, na zavatra kely na kely lavitra avy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, ary na dia avy amin'ny anaram-boninahitra sasany aza. Nandritra ny fihetsiketsehana dia antenaiko ny olona hiteny hoe: “- mila olona avy ao amin'ny tanàna izahay. Teny am-pandrenesana ireo teny ireo izay nandre ny renin'ny reniny niala ny tanàna. Tao anatin'ny tolona ho an'ny fandresena ny fahefana dia nisy ny ezaka nataon'ny zazalahy tsirairay ho mendri-kaja. Nisy ihany koa ny filaharan'ny tovovavy nesorina tsy ara-drariny tao amin'ny biraon'ny mpanjaka tamin'ny fomba nentim-paharazana teo an-toerana. Samy manao izay tsara indrindra vitany izy ireo mba hahafahan'ny safidy farany manondro iray amin'ireo rahalahiny zokiny. Ny iray tamin'ireo andriambavy dia tsy nisalasala nandrahona ny Mpanjaka: "- iza no handaozanao ahy?" Nanokatra ny taolako tao Yaoundé aho ho an'ireo Minisitry ny Raharaha Rdpc. ". Tsy maintsy hazavaina fa ny mpanjaka mpanjaka, ny vadiny ary ny zanany dia ny mpanjaka. Ao amin'ny tokotanin'ny mpanjaka, ny reny sy ny zanany dia fianakaviana reny. Toa ahy fa tsy ady ara-batana io ady io. Ny iray amin'ireo namako tamin'ity tranga ity, ilay hany tokana nanambatra ny hatsaran-tarehy, ny hatezerana, ny hatsaran-toetra ary ny fanatrehana io asa io, dia maty novonoina. Nisy sefom-pirahalahiana hafakely sy iraisana iray hafa niova ho fotoana iray tao amin'ny "toutou". Fanjakana iray mandalo amin'ny toerana iray izay niniana natao, saingy manonofy tsy misy dikany ny teny nambaran'ny mpanafika tsy fantatra. Vitany ny nanao ny hadalana tamin'ny nitenenany tamin'ny mpanjaka hoe "efa nomenao ahy io toerana io" Ireo zavatra rehetra ireo dia nahatadidy ahy tampoka. Hoy aho tamin'izay: Ry firenena, azonao antoka ve fa amin'ny fampiharana ny asanao dia efa nanome ny tsara indrindra vitanao ianao sa mieritreritra ny ho avy tsara indrindra ho an'i Fondjomekwet? Ho an'ity fanontaniana ity dia nekeny fa nanontaniako azy ny momba azy. Nataony tsikelikely ny lohany avy eo ankavia ka nangataka lohahevitra iray nijoro teo mba hitarika ahy any amin'ny trano fisakafoanana ary hanompo ahy izay tiako. Inona no nataoko tamin'ny Majy mendrika ho mendrika an'izany? Tsy afaka niteny izany aho. Na izany aza, tamin'ny tsikitsiky mamony, dia nisy andriana roa nanaraka ahy teo am-baviko. Tao anatin'ny toe-javatra tsy mampahazo aina aho, ny fomba amam-panao dia tsy hoe enta-mavesatra ho an'ny Mpanjaka isika. Amin'ny maha-malaina azy, dia milaza amiko aho fa tsara kokoa ny tsy mihinana afa-tsy ny manarona ny tenako amin'ny tsy fahafaham-baraka mahita ny mpanjaka mametraka ny volavolan-tsakafoko ao amin'ny hotely. Nieritreritra an'izany aho rehefa nahita ankizivavy kely niditra ny efitrano. Nanao fihetsika mialoha azy aho ary nanazava taminy ny toe-draharaha tsy misy fikarakarana. Avy eo izy nanasa ilay mpitsabo hitondra azy ilay volavolan-dalamby tao amin'ny efitranony. Avy eo dia niverina tany amin'ireo namako roa aho tamin'ity indray mitoraka ity. Raha teo amin'ny safidy ny tsirairay, dia notapahina ny latabatra. Nitohy ny resaka. Ary tsy mba nahazo nitandrina ny fitondrana am-bavahady ny andrianako; Vonona hiresaka amin'ny mpanjaka aho. Koa toa nalahelo ny niresahan'izy ireo tamin'izy ireo. Ka dia namaly tamim-pahatsorana ny lesoka sy ny fiheveran'izy ireo aho. Hitanao ve? Ity izany. - Azo atao izany ... Ary satria tsy hitan'izy ireo fa tsy niaraka tamin'izy ireo aho, dia niverina tamin'ilay fanontaniana nanosika ahy ireo tsy fahombiazana ireo. Ahoana no ahafahako manazava fa ny dadabeko, ilay Mpanjaka izay ben'ny tanànan'i Banja nandritra ny folo taona mahery, dia tsy misy lalana azo antoka ho an'ny tranony? Amin'ny vanim-potoana maina dia mahatratra ny haavony 20 cm. Amin'ny toetrandro orana, tsara kokoa ny mandeha an-tongotra fa tsy amin'ny fiara raha toa ka efa be dia be ao anaty tendrombohitra manodidina ny alàlan'io lalana io. Ny teknikan'ny fanorenana vato voapoizina dia efa nisy nandritra ny 20 000 taona talohan'ny androntsika. Tao anatin'ireny karazana eritreritra ireny aho rehefa niditra tao amin'ny efitrano ny mpanjaka, nampita ahy tany aminy ary nilaza hoe: - Iza no tonga hanao inona ao amin'ny firenena ary nolaviko? - Ny mpanjaka dia ambony noho ny tsara rehetra amin'ny firenena! Hoy aho. - Takatrao! Nolazainy ary nandao ity toerana ity. Natahotra aho ka namaly ny fanontaniany. Avy amin'ilay mpangalatra aho teo am-piantombohan'ny resadresaka, nanjary mpangataka aho. Nolazaiko fa ny fanontaniana izay nahatonga ahy niato tao amin'ny trano fandraisam-bahiny dia nahatsikaritra azy ireo ny tsikera sy ny fanalam-baraka izay nolazain'ny mponina mikasika azy sy ny zavatra fantany. Avy eo dia nanapa-kevitra izy ny hahafantatra hoe iza avy ny andaniny. Tiany ho fantatra raha izaho dia solontenan'ny fahavalony na mpihetseham-poko fotsiny. Ny sary an'ity mpanao famonoana ity izay maty nalemy noho ny fampidirana antoko mpanohitra tao an-tanàna dia namakivaky ny lohako. Nolazaiko tamin'izany fa miankina amin'ny valin'ny valinteniko amin'ny fanontaniany ny maha-ara-batana sy ara-tsaina ahy. Ankoatra izany, inona no mety ho valin'izany? Miaiky fa azo atao ny fanakianana. Tsy ela dia nifandray tamin'ny feon'ny fieritreretany ny raibeko rehefa tonga ny fotoana tsara. Hatramin'io fomba fijery io, ny fanontaniako dia pedagogika. Noho izany dia tsy fahendrena ny nahita fomba fombafomba mahafinaritra mba hilazana azy fa ny fahamendrehana dia manamarina ny tsy fihetsehany amin'ny tsy firaharahan'ny olom-peheziny. Saingy tsy afaka nanadino ny Mpanjaka fa tsy teo anoloan'ny mpankafy izy; Taona 35 izay nanandrana ny hahita azy isaky ny misy ny fotoan-tsarotra. Saingy ny valin'ny fanontaniako dia nanamarina ny tsy fahombiazako. Tamin'ireny maso ireny dia nandà tsy handray ny anjara asako ho mpanohitra aho ary hamoha ao aminy ny zava-bitany. Ao amin'ny sehatry ny famoretana, ny mpanohitra dia resy raha tsy efa nanamafy ny toerany. Io Mpanjaka izay manana andraikitra ambony io dia tsy afaka hiala amin'io fitsipika io. Izany no nahatonga ahy ho marim-pototra mivoatra. Ary nialoka tao aho tamin'ny filazàna fa izany no tsara amin'ny firenena. Ary ao am-bavany, "azonao" dia midika hoe "ianao dia tafiditra ao anaty ary mahasoa anao. Ka dia kanosa malotamo aho. Ilaina izany satria ny fahamaotinana tamin'izany fotoana izany tao amin'io trano fandraisam-bahiny io, dia ny hitady tsiambaratelo taloha mba hahazoany fanitarana ny trosany amin'ny andro. Na izany aza, tsy nisy azo antoka ny fisalasalana mialoha. Rehefa manintona antsika ny vehivavy iray mahafinaritra, dia indraindray ny manaiky ny fanalam-baraka lehibe kokoa.
Ny voninahiny Kamga David, Mpanjakan'ny fondjomekwets dia maty tamin'ny 4 Desambra 2008. Ny fe-potoam-piarahamonina hifanaraka amin'ilay voatendry ho mpandimby dia natsahatra tamin'ny 4 2009 tamin'ny Janoary. Tapa-kevitra aho fa tsy haka kandidà matotra. Nihazakazaka aho noho ny fanararaotany ny fanatrehako fa nivadika taminy ny mpanjaka. Te hahatsapa aho avy eo fa hampionona azy taorian'ny fahaverezan'io fiampangana be faniriana io. Izaho koa dia mpibaiko an'io satroboninahitra io. Saingy nanamarika aho fa farafaharatsiny ny olona 475 dia tsy afaka nanapa-kevitra ny hanao ny asan'ny Mpanjaka. Noho izany, tsy nanana fahafahana aho. Ny Alahady tao Fondjomekwet, dia ho mpijery aho.
Indraindray isika dia manintona ny zavatra azontsika hazavaina. Andro vitsivitsy talohan'ny andro "j" androany dia niaraka tamin'ireo rahalahy sy anabaviko aho izay nandeha nanao ny asa nilaina tamin'ilay hetsika. Mandalo bistro ao Bépanda Douala, ny teny, "hey! Whoweoui (iza moa izany?) Abubakar, "naneno. Nijery aho ka nahita printsy iray izay nifanentana taminy tsara. Ka niantso mafy aho hoe: - Miehou (Ny fahalehibiazany) manao ahoana ianao? - Midira ary mipetraha! hoy izy. Izay nataoko. Avy hatrany dia nanome baiko izy fa hanompo divay tsara ry zareo. Inona no vita? - Ilay Mpanjaka no manolotra anao, ny Mpanjakan'ny fondjomekwets! Hoy izy hoe. Azoko ny antony nahatonga ny masony hohazavaiko rehefa nantsoiko izy hoe "ny fahamendrehany", na dia kely sy kely aza. Aiza no mety hitranga toy izany? Ny vavan'ny rainy dia tsy isalasalana. Ny raibeny angamba no nanome antoka ny fizotry ny fifandimbiasany amin'ny zanany tsirairay izay maniry mafy ny hahazo fahefana. Tsy nisy olona afaka mahatsapa fa politika mitahiry izany. Io liona tranainy io dia tsy maintsy nisoroka ny fisalasalan'ireo lehilahy tao amin'ny fitsiriritany ny fitsiriritany, na nifamono mihitsy aza tamin'ny tolona ara-drariny hidirana teo amin'ny seza fiandrianana. Mety hivoaka avy ao amin'ny sehatra ny taniny. Ary koa, rehefa nilaza tamiko ny Mpanjaka "- izay iray izay Mpanjakan'ny firenena, dia io no tsy hitady palaver satria efa ho Mpanjaka", ny teny hoe "ne aza mandeha mitady palaver ”. Tao anatin'ny fitiavany lalina ny zanany, dia namirapiratra teo amin'ny seza fiandrianana rehetra izy ary nangataka tony. Iza no mety ho nanao an'izany? Tsy mahita fomba hafa azo antoka aho amin'ity adihevitra ity. Na izany aza, amin'ny fiarovana azy, ny fandriam-pahalemana ao an-dapany, ary amin'ny fahaiza-mandanjalanjany dia mety hitranga ny hamonoana ny mpanjaka amin'ny alalan'ny fitaovana miafina, ny an'ny zanany izay manentana ny fahefany amin'ny fahefana. mba hanohitra ny safidy fifandimbiasan'ny rainy. Izany no azo lazaina any amin'ny tribonaly sasany, ny fahafatesan'ny lehilahy sasany alohan'ny an'ny Mpanjaka. Ary tsy miteny aho fa izany no raharaha amin'ny fondjomekwet. Fa manolotra izany fahafahana izany aho amin'ny toe-javatra sasany hita any an-kafa. Ity dia mety manosika ny mpahay tantara izay hamaky ahy tsy hametra-pialany amin'ny lalao amin'ny sehatra rehefa handinika amin'ny antsipirihany ny zava-misy mifandraika amin'ny sehatr'asa. Satria mety hampidi-doza ny fahefana rehetra, na dia ho an'ny tenany ihany aza. Na demokratika io fahefana io na tsia. Ary ankehitriny, manan-danja eo anoloako aho, izay mpanjaka efa voahosotra efa manokan-tena. Raha nijery aho, dia nahaliana ahy ny fahalianana. Tsy toy ireo rahalahy sy anabavy hitako fa izy irery no tsy nanana ny toetran'ny rainy ara-batana. Saingy noho ny fahamendrehany dia tsy nisy fiheverana io lafiny io. Satria mbola tsy mpanjaka izy dia afaka mangataka fanontaniana mangina aminy aho. Tsy noho ny maha-Mpanjaka azy, fa tsy tiany ny fanontaniana mangarahara, fa raha misy iray amin'ireo singa ao amin'ny fitsarany izay manampy azy amin'ny adidiny, dia mahatsapa fa tsy nanaja ny mpanjaka isika, afaka mandray fitsaboana ara-psikolojika. Nankasitrahako ny teny hoe "tombony ho an'ny tanàna", "bebe kokoa ho an'ny tanàna." Ho azy dia ny zandary sy ny bourgeoisie eo an-toerana dia tokony ho toy ny fiaraha-mientana ara-tsosialy ho an'ny tanora ao an-tanàna ankoatra ny fianakavian'izy ireo. . Ary koa, tamim-pahatsorana aho rehefa nandao azy dia nilaza taminy hoe: - Ny fahalehibiazany, reharehako mahafantatra fa eo amin'ny fitsarana isika. Amin'iza na aiza na aiza no nisy anay teo amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena, dia mazava ho azy fa tsy ho azy izany. Ny honohono any amin'ny seranan-mpanjaka dia milaza fa ilay Mpanjaka no teraka nitondra marika marika teny an-tanany. Saingy tamin'ity tranga ity, nisy ny maro tamin'ity toe-javatra ity. Tsy voafitaka ny raibeko. Ny vehivavy rehetra manamboninahitra ao amin'ny lapam-pitsarany dia mahafantatra ny fomba hanamboarana izany toe-javatra izany eo amin'ny zanany lahy tsy teraka. Ary ny olona izay tsy manana fanombohana ampy dia afaka manamboatra mpampiasa. Fantatr'ilay raibeko fa niady imbetsaka izy, Tsara ny nahazoan'ny lehilahy malemy saina, tsy afaka nanova ny safidin'ny Mpanjaka ny toetrany ivelany. Efa niteny aho fa tsara indrindra, ilay kandidan'ny 475th. Ary nataoko ho fahatsiarovan-dry zareo ny valiny, raha ampitahaina amin'ny mpifaninana hafa, dia toa nahitana tetikasa ara-politika aho ary tezitra tamin'ny tsy nanosihosena ireo kandidà hafa. Tsy nisy izany satria tsy ny rehetra no tany amin'ny firenena. Tsy afaka nanome azy laharana aho. Ary tiako izy ho ny Mpanjaka manaraka ny fondjomekwets. Mbola nipetraka izy satria te ho any amin'ny tanàna faran'izay haingana.
Io alahady io dia tonga tao amin'ny filankevi-pitantanana Fondjomekwet ho any 9h amin'ny orinasa tsara. Nandritra io fotoana io dia nieritreritra aho fa tsara kokoa ny mahazo fanampiana-de-camp. Tsy maintsy mendrika ny mendrika ny handinihako ny fiheverako sy ny fahafahako manaiky ny fitarihako. Tsy nanana fahasarotana aho tamin'ny nahatongavako niaraka tamin'i Charles Ruffin Toche, sarin'i Chugou. Raha vantany vao tonga tao amin'ny tranon'ilay fianakaviana aho dia sahirana niandry anay ireo rahavaviko kely, nanandrana ny fahafinaretana hitady ny zandriko lahy aho. Nanana mpanjaka tao aho. Nasehoko azy ireo ny fankasitrahako ary nandeha tany amin'ny toby natokana ho an'ny fihetsiketsehana. Teo am-baravaran'ny tranon'ny mpanjaka aho dia nahita trano fivarotana iray am-polon-tany novolena tao anaty kitapo hazo. Ireo no toerana natokana ho an'ny sakafony izay tokony hanaraka ny fiaraha-miasan'ny mpanjaka vaovao. Toa ahy ny noraisiko tao amin'ny fivarotana 3, nomem-boninahitra aho ary nanambara ny tenako fa, raha nomena ilay tontolo goavana nambara fa tsy voamarikao aho. Farany dia tonga tany amin'ny toby aho. Nisy tribune nanolo-tena ho an'ny andriana, tribune iray natokana ho an'ny tanàna hafa, tribune ho an'ny anaram-boninahitra, mpanjaka sy manam-pahefana ary tribune iray ho an'ny vehivavy ny fianarana, ny namany ary ny mpiara-dia aminy. Izaho no naka ny toeran'ny andriambavy. Ny tena zava-dehibe tamiko dia ny filozofia politikan'ny vaomieram-pitondrana vaovao izay, io maraina io, no nandidy ny mpiadina. Avy eo, raha tsy nitandrina aho, dia nijery ireo mpandahateny nifampiresaka teo amin'ny sehatra mandrapahafantarana ny solontenan'ny printsy sy ny andriana teo amin'ilay sehatra. Nandritra ny dingana iray azo antoka, dia nandeha haingana izy mba hilalao ny anjarany. Tao anatin 'ny tonony mazava sy mahafinaritra, dia nanamafy ny fahafahan' ireo rahalahy sy anabaviny izy ireo hanaiky fa tsy hampandefitra ny Mpanjaka izay hotendrena. Noheveriko fa fahendrena izany. Moa ve izy hanodina ny lahateniny amin'ny alàlan'ny fanararaotra io fahafahana io hanohitra ny fomba fanendrena mpitarika manilika ny vehivavy? Ny zanakavavin-drainy dia afaka ny ho mpandala ny nentin-drazana. Ary koa, tsy gaga aho raha nanararaotra nanararaotra izy noho ny nanamafisany ny fanovàna ny tanàna ao Fondjomekwet ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana. Ara-dalàna izany. Rehefa nahita ny fahatanoran'ity tovovavy ity aho, dia nilaza aho fa ny fahefana dia manavao izany any Kamerona. Ao Fondjomekwet isika dia manidina lay Rdpc tahaka ny any Yaoundé dia manidina ny sainam-pirenena frantsay. Ny fitaka ny fondjomekwet, dia ny hoe iray ihany ny valim-pifidianana manan manohana ny CPDM mba nanantena fitia sy ny toerana bebe kokoa eo amin'ny fitantanan-draharaha raha mbola miaraka amin'izay koa ny mponina tsy fisian'ny lalana mba mamoaka ny famokarana ny fihinanana foibe . Ny fitaka dia ao Yaounde fa izahay hiala goavam mba hividy ny fitaoman'ny Frantsay manam-pahefana mba ho azo antoka ny ho mpanompo voatendry, ambasadaoro na ny filoham-pirenena raha mbola miaraka amin'izay koa, noho ny tsy fisian'ny famatsiam-bola fototra foto-drafitr'asa . Ny tsy fahampian'ny filôzôfia. Mahafinaritra azy ireo ny fotoana. Tsy misy dikany ny Thought. Ny filôzôfa dia miantso ireo tombontsoa ireo ho fanintelon'ny tsy misy.
Vita ny fotoam-pitenenana. Tamin'ny feon-drôma, dia nidradradradra ny reniko teo am-baravaran'ilay fitroarana izay nirohotra nankany amin'ny toerana izay nanenoan'ny tamtams. Efa anisan'ny nahavita ny fandresena izy. Na izany aza, raha mbola narary izy dia nigogogogo ary faly aho nahita azy toy izao. Tovolahy Valor izy. Tsy mba mpilalao sarimihetsika na mpihira teo ambany fitondran'ny anadahiny sy Mpanjakan'ny fondjomekwets izy. Toa ahy fa fitaovana iray fotsiny fa toy ny ravina maty tao anaty rivotra; Tao izy no toerana nanirian'ny Mpanjaka azy tsy nisy fanonerana. Saingy nahafaly azy izany ary toa hendry ny nandao izany tamin'ity toe-javatra ity. Ny tanjon'ity folklore notarihany ity dia ny hanintonana ireo printsy sy ireo printsy mba hahatonga ny fampiharana ny protocole manana lesona ampy mba hijerena sy hisafidianana ireo nomena ny mpanjaka farany. Nahita ankizilahy telo sy ankizivavy iray niara-nifidy aho. Ny reniko izay nifidy ilay zazavavy. Tamin'izany fotoana izany dia nahatsapa ny toerana ambony teo amin'ny Fanahin'ny rahalahiny lahimatoa ilay mpanjaka aho. Fantatro fa manomboka androany ny fahafatesany dia tsy te hahita ahy izy. Tsy nolazainy tamiko hoe iza no nofidin'ny mpanjaka rahalahiny. Nihevitra aho fa i Tchoumbou no nifamotoana voalohany, ilay mpanjaka vaovao. Saingy rehefa tonga tany Lagkam izy dia efa tany Djoumbissie. Izany dia satria herinandro vitsivitsy talohan'ny nahafatesany dia nanasa ny sakaizan'i King Chula ny mpanjaka Kamga hanolotra azy ho toy ny fomban'ny tsy fivadihana. Taorian'izany dia nametraka solontena kely iray, namorona ny Anabavy Lehibe roa an'ny Mpanjaka Kamga io namana io, nandefa fonosana ho an'ny lapam-panjakana tao Bafoussam. Ity fonosana ity dia ahitana, araka ny baiko, ny anaran'ireo nomena ho an'ny Chiefdom of Fondjomekwet. Ireo lohandohany Batié, Banja ary Fomopia dia nahazo kopia. Noho izany, rehefa nahita ny Djoumbissié tany Banja ny fisian'ny protocola voalohany, dia tratra izy ary nitarika an'i Lagkam nandritry ny niandrasany ireo solombavambahoaka. Amin'ny tsindrin-tsakafo dia azo lazaina fa fepetra fiarovana; noho ny faniriana hanao ny asan'ny mpanjaka. Satria, raha mbola tsy niampita ny morontsirak'i Lagkam ny olona natolotra, dia mety amin'ny fomba iray ihany no mety ho resin'ny tsy fahaizan'ny governemanta. Raha ny karazana, ireo zanaka izay niara-nifidy teo amin'ny kianjam-bahoaka dia toy ny ampinga ho an'ireo izay any Lagkam. Matetika i Lagkam dia manoratra an'i Lâkam amin'ny mpanoratra sasany; Fa rehefa manoratra aho hoe "Lagkam" dia toy izao no ilazako izany amin'ny patois. Ity teny ity dia midika ara-bakiteny midika hoe "toerana fanangonana" tany am-piandohana, izany hoe "firenena mpangalatra". Ao anatin'izany toe-javatra izany no ahafahan'ny tara-pahafatesan'ny mpanjaka tara-pahazavana ny fahafahana hanao ireo asa izay ho tafiditra ao anatin'ny andraikiny. Rehefa tsy navoaka ny solontenan'ny Lehiben'ny Fitondrana ny mpanjaka vaovao an'ny fondjomekwets, dia efa tany Bafang aho no nandao ny maraina. Ity fitambarana ity dia mitovy amiko. Ao amin'ny repoblika sy ao amin'ny fanjakana, tsy maintsy mazava tsara fa ny mpanjaka dia manana ny maha-ara-drariny azy raha ny fijeriny ny hetsika ara-politika, fandraisana anjara ary maro amin'ireo mponina manaiky ny fahefany.
Fa ho aiza no nalehan'ny namako Printsin'i Bepanda? Tsy anisan'ireo voafidy izy. Tsy mbola nahita azy tao anaty filaharana koa aho. Raha ny fahitako azy dia heveriko fa hamela ny tenany hilatsaka izy raha toa ka nilaza taminy ny olo-malaza iray tao amin'ny tsiambaratelon-drainy: - tsy ao anatin'izany ianao. Roa andro taty aoriana dia mbola tsy naka ny findaiko izy. Nanapa-kevitra ny tsy hiantso azy intsony aho. Vokatra madio an'ny Biyaism izy io. Mila manidy ny rafi-pifidianana ho an'ny filoham-pirenena ve isika raha azo atao ny mandresy azy? Tsy fahamatorana ara-moraly sy ara-politika ve ny miatrika fifidianana raha tsy mendrika ny hahazaka faharesena ianao? Raha ny filazan'ireo mpitsikera, ny fitantanana ny fifidianana any Kamerona dia tsy mamela ny hisolo toerana hisolo toerana. Avelantsika holazaina izany mba tsy hampiharihary tena amin'ny serivisy miafina toy ny fondjomekwet, avelantsika ny mpanjaka hanao izany mba tsy hampiharihary ny tenanay amin'ireo fiarahamonina miafina. Izany no fiainana. Tany Fondjomekwet, olona iray ny mpifidy, ny mpanjakany efa ho faty.
Ity tantara fohy ity dia toa manazava mazava tsara ny hamelako hamaly ny fiampangan'ny Kamita na Kemites (teny iray avy amin'i Cham na Kam, anarana taloha an'i Ejipta) sy ireo Pan-Afrikana hafa manohitra ny demokrasia. Andao aloha hijery izay lazainy:
1- Ny modelim-pitantanana ao amin'ny renivohitra nentim-paharazana dia azo henoina eo amin'ny sehatry ny fanjakana.
2-Tsy mametra-pialana ny kolonely isika
3 - Ny demokrasia dia tsy mametraka ny tena olana eo amin'ny fiarahamonina.
4- Any Andrefana, ny demokrasia dia toherin'ny olona.
5 - Ny demokrasia no dingana lehibe indrindra amin'ny imperialisma
6- Afrika dia tokony hanangana ny modely siantifika, ekonomika ary politika.
Naka ny tantara toy ny fanangonana antontan-taratasy, dia manolotra ny deconstruct tolo-kevitra ireo dia maneho fa ireo tsy fankasitrahany an'ilay ezaka Demokratika avy ao amin'ny regressive sy ny famoretana resy eritreritra avy 60 taona ny American Barry Goldwater. Tsy maintsy lazaina fa ny Hetsiky ny ka (é) mite, izay mikendry ny fampiroboroboana afrikana amin'ny alàlan'ny fomba tiany, dia fantatra kokoa any Etazonia sy amin'ireo Afrikana any am-pielezana ao Eoropa. Ny fihetsiketseham-panoherana ny Afrikana dia fihetsika manjavozavo izay miantso ny firaisana ara-politika ao Afrika hatramin'ny taona 50. Tahaka ny Movement rehetra izay samy manana ny marika, ny fahasamihafan'ny fomba fiasa dia misy azy ireo. Saingy toa ahy fa misy vondrona milaza fa ity Movement ity dia mipetraka amin'ny televiziona ary manana ny làlam-po, antoko demaokrasia. Ny mpitarika azy dia i Banda Kani.
1 - Ny modelim-pitantanana ao amin'ny sehatra nentim-paharazana dia tsy azo averina amin'ny sehatry ny fanjakana.
Ny loham-pinoana nentim-paharazana dia manentana ny olona rehefa tonga any amin'ny fanjakana. Afaka miantso eto i Mobutu rehefa mampitaha ny tenany amin'ny mpitondra Bantu izy, izay, araka ny filazany, dia afaka mamela ny fahefana amin'ny fahafatesany. Afaka mamaky an'io fikasana io isika ao Biya rehefa nanolotra ny fomban-drazana isan-karazany tany amin'ny fireneny, rehefa nandray fahefana. Azo antoka fa hanohana ilay hevitra mampiahiahy momba ny "lehiben'ny lohandohany". Ao amin'ny sehatra ambony, ny maha-ara-drariny ny Lehibe dia avy amin'ny rainy, izay sady Filoha koa. Eo amin'ny sehatry ny fanjakana, ny maha-ara-dalàna ny filoha dia afaka ny ho avy amin'ny fahafahan'ny olom-pirenena tsirairay hientanentanana ary mety hampihatra ny asan'ny Filohan'ny Repoblika. Ary izany dia midika ny fifidianana sy ny fiovana. Ireo Afrikana madinika, izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny lehiben'ny tanàna, dia maniry ny hampiditra azy ireo rehefa tonga eo amin'ny lohan'ny sampana. Amin'ny maha-fomba fitantanana azy, dia mamolavola zavatra tsy misy dikany izy ireo eo amin'ny fianakaviany, ny foko misy azy, ary ny namany amin'ny fandosirany ny sisa amin'ny firenena. Ireo zavatra ireo dia entina amin'ny kolikoly, ny fitantanana tsy ara-pitantanana, ny antokom-pivavahana ary ny famonoana. (1) Mba ho fahafatesan'izy ireo, ny famonjena ny tombontsoa ihany dia avy amin'ny fitsanganan'ny zanaky ny maty na ny mpiara-miasa akaiky aminy eo amin'ny fitondrana. Ity zanakalahy ity dia nanjary mpivady iraisam-pirahalahiana eo amin'ny mpomba ny mpiloka sy ny jiolahy ara-politika izay mandà ny fanehoana ny lalao ara-politika rehefa manao ny saron-dohan'ny fifidianana. Najanona sy najanona noho ny tombon-dahiny izy ireo, mahita fotsiny ny loza mitatao amin'ny sakafony izy ireo amin'ny maha-mpanohitra azy izay mampijaly sy mampijaly azy ireo. Raha tsy miraharaha ny olana atrehin'ny fireneny ry zareo dia tsy afaka manomana ny fahatanoran'izy ireo hiatrika ireo olana atrehin'ny hoavy. Ny mpanohitra dia miteny fa mahita izany koa any Amerika miaraka amin'ny fianakavian'i Bush ary ankehitriny miaraka amin'i Hillary Clinton. Diso izany. Ireo antokon'ireo antoko amerikana, manampy amin'ny fananganana ny fahatsiarovan-tena demaokratika ny kandidà. Noho izany na inona na inona ny hatsaran'ny fandreseny amin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny mpandresy dia eo ambany fitondrana jadona ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka. Ny Amerikana Amerikana dia manana demaokratika matanjaka, ary mpiara-miasa matanjaka amin'ny famolavolana ny ho avy ary manangana ny fomba fijerintsika ny hoavy.
Ny mpanjakan'i Afrika dia meloka satria tsy nahita ny fivarotana andevo. Izy ireo dia meloka noho ny tsy fahitana ny fanjanahana. Ary taty aoriana ireo izay nalain'ny filohantsika, dia meloka avokoa noho ny tsy nahafahany nanolotra ny tanindrazany, ny metamorphose mahazatra toy ny an'i Sina, Korea Atsimo ary na India aza. Ireo mpanjaka Afrikana sy filoham-pirenena afrikana dia tokony hiaiky fa mpandà ny tantara izy ireo. Mihevitra isika fa tsy fahombiazana izany. Ary raha tsy mahomby izao isika, dia hisy ny taranaka ho avy hanatsoaka fa tsy kilema izany. Aesop dia olo-malaza Afrikana. Tsy maintsy niatrika tamin'ny androny izy ny fanesoana ireo mpamaky ny karazana eoropeana, izay naneso azy noho ny tsy namakiany ny Afrikana, tsy nahazo tombony avy amin'ny fahendreny ambony. Soa ihany fa nahita ny asany i La Fontaine. Ary isika rehetra dia mamaky ny faba "The Wolf and the Lamb. Fa firy amintsika anefa no mahafantatra fa ny zanak'ondry dia ilay meloka? Na ahoana na ahoana, ny ambin'izao tontolo izao dia nahatakatra izany afa-tsy ny Afrikana. Ary ny firenena farany hahatakatra izany dia i Shina. Ary tsy ela taorian'ny nahatakarany azy, dia nivadika ho Wolf izy. Ahoana izany raha tsy izany? Tsy misy zavatra hafa raha vao azonao ny tadin'i Aesop. Amin'izao fotoana izao ny fanontaniana tokony hapetraktsika amin'ny tenantsika dia ny mahafantatra ny zava-mitranga. Amin'izay, ny ho avy dia ny fitohizan'ny fotoana. Koa raha tsy mahavita ny valiny isika, dia ho very ny ho avy. Ity tsatòka ity dia toa ahy ho Demokrasia. Ny demokrasia, amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra maro sy ny fomba hafa ahafahana mamela azy, dia manampy amin'ny fanehoana ny mangarahara ary noho izany ny fahatanterahan'ny fiarahamonina. Milaza ny mpanohitra fa tsy misy halatra na fanodikodinam-bola ny filoham-pirenena. Ratsy ny mahafantatra ny fiainana andavanandro ao amin'ireo sehatra ireo. Aiza ireo tantaram-pirahalahiana sy ny filalaovana ody avy amin'ny loham-pianakaviana? Ny famatsiam-bola amin'ny volam-bahoaka na tsy miankina dia ambony amin'ny ambaran'ny vampirism. Ny mpamosavy mamono olona iray, namono firenena iray ny hijacker. Na izany aza, manasa anao izahay handefa ny filaminana nentim-paharazana amin'ny heviny hoe lova voajanahary izy ireo ary mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny soatoavina. Ny hetsika ara-toekarena sy ara-pôlitika arahin'izy ireo dia manome be dia be amin'ny vokatra avy any an-toerana avy amin'ny firenentsika. Saingy tsy afaka manangana toeram-pamokarana maoderina toy izany izy ireny.
2 - Democracy in Colonies and States Postcolonial.
Ny hevitra ho mendrika ny zanatany frantsay an'i Afrika dia rariny ao an-tsain'ny mpitsikera, amin'ny heviny hoe Frantsa no mitondra ny fihenan'ny ireo zanatany teo aloha noho ny fanampiany mba hamono ireo mpisintaka izay afaka Nihevitra ny andraikiny amin'ny mitarika ny fireneny ho amin'ny fandrosoana sy ny fitetezana. Ary toa ahy fa tsy misy fanavaozana minisitera hafa ao amin'ny firenena miteny Frantsay ankehitriny, izay niasa tsy nahafantatra ny manampahefana Frantsay. Fa eto, Aleoko ny teny hoe postcolony dia hahatsapa ny fahadisoam-panantenana ny fahaleovan-tena te ho recolonization ny firenena sy izao no toa manamarina ny isa Lionel Sinsou Benin sy ny Paris antso ny Filoha vaovao ity firenena ity hatramin'ny nitsidihany voalohany an'i Frantsa. (2) (3) Na izany na tsy izany, ny zo Amerikanina dia efa nahatsikaritra io fitomboan'ny filàna ny fiankinana eo anivon'ireo mpifindra monina Afrikana. Izy izay miantso amin'ny feon'i Donald Trump mitaky ny famerenana indray an'i Afrika, dia nilaza izy fa mampianatra antsika hanao lalao. Raha ny marina, dia tsy hijanona amin'ny Eoropeana sy Aziatika ny Amerikana raha toa ka voatondro io toe-javatra io. Anisan'ny Repoblikana, tsy azo ovaina amin'izao fotoana izao ny orinasa Amerikanina mividy haingo frantsay mora vidy ho amin'ny teny Frantsay sy Anglisy raha afaka mampiasa ny toerana manan-danja izy ireo mba hahazoana mivantana ireo loharano ireo.
Ny fandrosoan'ny demokrasia dia toa tsy azo lavina ao amin'ny firenentsika. Ny porofon'izany dia ny fampiroboroboana ny gazety sy ny fandaminana ny fifidianana. Ary ny fiverenana ara-toekarena ambany noho ny demokratisation ny andrim-panjakana, dia avy amin'ny tsy fisian'ny governemanta ho toy ny mpitatitra ny tsena ary amin'ny famoahana ny tsy fahombiazan'ireo mpilalao sarimihetsika. Ny tanjon'ny governemanta ao amin'ny firenentsika dia tsy ny fikatsahana ny fahombiazan'ny fiaraha-monina, na ny fepetran'ny fehezan-dalàna mifehy ny rafitra, fa ny fitantanana ny fiarahamonina sy ny andrim-panjakana ho an'ny tena manokana, tsy manampy mpandray anjara ara-tsosialy, fa mba hankafy ny fahefana araka izay tratra. Izany dia manazava ny antony nanaovan'i Biya hoe: "Aza maika amin'ny fahefana. Fomba iray hilazana hoe "avia ary ento aho raha afaka. Noho izany dia ao anatin'ny fifaninanana izay tsy anjakan'ny governemanta ny olom-peheziny. Tsy ny hadisoan'ny demokrasia izany. Io no tsy fisian'ny demokratika eo amin'ny fitondrana.
Ny fomba hananganana ny fahatsiarovan-tena demaokratika amin'ny fahefana ao amin'ny fanjakana dia toa ahy ny fanontanian'ireo fanontaniana mafin'ny demaokratika any amin'ny firenentsika fa tsy ny fanamelohana ny demokrasia.
3 - Ny demokrasia dia manampy amin'ny fametrahana ny tena olana eo amin'ny fiarahamonina.
Tsy vitan'ny demokrasia ny mametraka ny olan'ny fiarahamonina. Ity tetikasa ity dia natao ho an'ireo mpandray anjara izay manandratra ny fiainana demôkratika. Izany no Marketing ara-politika. Ilaina ny mamolavola ny filan'ny vahoaka mba hihaona amin'izy ireo miaraka amin'ny fandaharam-pampianarana governemanta dia resaka ho an'ny mpanao politika. Fa ny mpanao politika kosa dia manolo-tena ho an'ny mpandraharaha ara-politika raha toa ka ny fahefana, ny fandraisana andraikitra, ny fandraharahana ary ny kolikoly dia lasa mpikomy amin'ny mpilalao. Ny tsy rariny vokatry ny governemanta, manasa ny ezaka fiarovan-tena ataon'ireo mpandray anjara hafa amin'ny fahefana. Amin'ny lozan'ny hery, ny fahaiza-manao amin'ny fiarovan-tena dia mety ho endrika fanamby mahafaty. Hitantsika tao amin'ny fanambarana fampidiran-dresaka fa ny fahefana rehetra dia tsy rariny amin'ny lafiny iray amin'ny lafiny izay nandositra azy ireo. Ny fifandanjana tsy tapaka eo an-tampon'ny fanjakana dia sady ilaina no ilaina ary ilaina ny filaminana sy ny fahombiazan'ny fiaraha-monina. Ity faniriana ny fanavaozana sy ny fanavaozana ity no tena tanjon'ny natiora. Ny vatan'olombelona mihitsy no havaozina tanteraka isaky ny iraika ambin'ny folo taona. Ity no lesona nataon'i Barack Obama tamin'ireo filoham-pirenena Afrikana sy ireo tanorantsika izay maniry hahazo tombony. Na ny demaokrasia na tsia ny fahatongavan'izy ireo, inona no ho an'i Shina tsy i Deng Xiaoping, Burkina Faso tsy i Sankara, ary Etazonia tsy Kennedy?
Deng Xiaoping dia vitsy an'isa tamin'ny mpanatanteraka ny antoko komonista rehefa nanomboka nanavao ny fanavaozana an'i Shina "atrik'asa manerantany". Raha tsy misy ireo fanovàna ireo, dia mbola mpilalao an-tsokosoko ihany i Shina amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fantatsika ny fanavaozana ny fambolena any Sankara any Burkina Faso. Raha amin'izao andro izao, ny vahoaka Burkinabe dia afaka mihazona ny lohany ho an'ireo mpanao didy jadona, satria noho ny fanavaozana ny kapiteny mandrakizay azy, dia nihataka niala taminy ny mosary. Nanomboka ny fandaharan'asa amerikana mena i Kennedy tamin'ny fotoana naha ara-teknika sy teknolojia, mbola tsy niomana i Etazonia. Ity programa ity dia namela ireo orinasa Amerikana nahazo tombontsoa tamin'ny ezaka fikarohana an-habakabaka mba hifehezana ny sehatry ny indostria manerantany ho an'ny 40 taona. Ny Repoblikana Reagan Tsy vitan'ny hoe nahazo ny firodanan'ny ny URSS, izay nampirisika azy kosa ny fanafahana fonja ny antoko tokana, fa manan-danja ihany koa ny nanome tosika ho amin'ny Silicon Valley izay nampiasaina ho fototra natomboky ny rehetra feno herisetra ( filoham-pirenena eo ambany fitondran'i Clinton) avy amin'ny fandaharan'asa "lalambe momba ny lalam-baovao" izay sady sekta sy mpanolotra aterineto no misy azy ankehitriny. Barack Obama dia nanangana fandaharanasa fikarohana ara-indostrialy tamin'ny 7 taona mahery noho Ahidjo-Biya tamin'ny taona 56 tao amin'ny Fiadidiana. Ny fandaharana farany amin'ity Black, ao amin'ny atidohan'ny atin'olombelona, ​​indray andro any dia hanome azy ireo robots amin'ny atidoha ho an'ny olombelona. Ireo robotitra ireo dia manamboatra orinasa amin'ny planeta manohitra ny lehilahy ary hamela ny fifanakalozana interplanetary voalohany. Ny vanja dia tsy manana tombony fotsiny; Ny fanangonam-bokatra iray dia afaka manamboatra ny famatsiana. Ary rehefa afaka ny andro ihany no hahomby ny alina, mavitrika fanavaozana ary hahomby foana nahiratra ny sainy, ary manatanteraka hetsika izay mikendry ny hampitombo ny harena ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny maro akaiky ny Infinity. Io filozofia izay teraka fa ilaina ny teny hoe fetra ho ny lohan 'ny firenena. Ny tanjaky ny andrim-panjakana Amerikana dia mifandraika amin'io hevitra io. Ny mpanohitra dia miteny fa, ny Amerikanina 30 dia mahantra ary tsy misy rafitra. Izy ireo feint ny manadino fa eto amin'ny firenentsika, ny fahantrana indraindray mahatratra 80% -n'ny mponina, ary izany, any Etazonia, mpifindra monina tsy ara-dalàna 20 tapitrisa no tsara kokoa ny miaina toy izay hiverina any amin'ny firenena niaviany. Hitantsika amin'ny tolo-kevitra Bernie Sanders fotoana izao ny mpifaninana Hilary Clinton izany, mihoatra noho ny firenena hafa rehetra, ny fahafahan'ny fanjakana any Uniens fanamby dia manam-petra.
4 - Any andrefana, ny vahoaka no tanjona sy tanjon'ny Demokrasia
Maka ny fahefana any Eoropa izahay noho ny tsara indrindra. Ny mpitarika tsirairay dia maniry ny hanatsara kokoa ny vahoakany noho ny teo alohany ary mampiasa izany ho an'ny fanavaozana ara-toekarena sy demokratika. Ary na dia nitarika ho amin'ny fikomiana aza ny fanavaozana dia ekena fa ny fanavaozana dia nohamarinina. Margaret Thatcher, ohatra, dia naniry ny handao ny fifidianana fa tsy ny fanararaotan'ireo sendikan'ny mpiasa anglisy. Izany no manavaka ny mpanao politika avy amin'ny populista. Ny iray dia mihevitra ny tena mahaliana ny fanjakana. Ny iray hafa dia mihevitra fa ny tombontsoan'ny tenany manokana dia ny fananany ny vahoaka. Eo anelanelan'ireo bao ireo dia misy lavaka iray manontolo. Ny iray mino ny fahaiza-mamorona ny vahoaka ary manatsara ny fandaharana ilaina hahatratrarana izany. Ny iray hafa dia mino ny fahafaham-pon'ny vahoaka ary mandà ny ezaky ny firenena ho amin'izany tanjona izany. Izany no mahatonga ahy ho loharanom-pahombiazana ao Etazonia, Alemana, Angletera, Japon ary Soisa, mifanohitra amin'ireo olana atrehan'i Gresy, Espana ary Venezoela, izay efa manankery. Ilay Andriamanitra Afrikana Thoth-Hermes dia manohana ny demaokrasia voadika rehefa miteny izy hoe: "Ny zava-drehetra dia mandalo mandrakizay avy amin'ny endrika iray mankany amin'ny iray hafa ary tsy misy ankoatra izany. Midika izany, amin'ny ambaratongan'ny fanjakana, ny fiovan'ny olona ary, matetika, ny fiovan'ny politika izay midika ho fanovana. Ny fahatanterahan'ny ny didy ny ny Andriamanitra Thoth "Aza ratsy aoka ianao hangina rehefa voalaza ny fahamarinana mamirapiratra mihoatra noho izay rehetra, tahaka ny masoandro," presupposes toerana misy olona,-bahoaka sy ny fahalalahana demokratika azo antoka. Ao 1964, anjara amin'ny fampielezan-kevitra filoham-pirenena an'i Lyndon Johnson ny kandidà ny Mafia ny miaramila ao amin'ny orinasa ny ady tany Vietnam, Barry Goldwater Nilaza tamin'ny mpanatrika tao Pennsylvania fa "Ny hery Federal dia tsy maintsy ho ampy ny mamela tonga ny fahalalahana amin'ny fahalalahana manokana, ny orinasa maimaim-poana, ny lalao amin'ny tsenan'ny varotra, ny logiques mifaninana ary ny fanomezana atokana ho fampiroboroboana sy fampiroboroboana azy ireo. " Raha miteny Barry Golwater izany, dia izy no mpandika teny ho an'ny vahoakany amin'ny an'i Afrikana Thoth. Tamin'izany fotoana izany, ny sosialisma Keynesiana dia ny sosialisma Keynesiana ary ny Kominista Marksista tokana dia nitana ny mpifanandrina taminy: Shina sy ny Firaisan'ny Repoblika Sosialista Sovietika. Nihiaka i Amerika hoe "Miala amin'ny fahalalahana liberaly!" Ary very ny fifidianana i Goldwater. Ny roa tamin'ireo mpandova azy anefa dia niafara tamin'ny volkano roa niaraka tamin'ny larvaire, Reagan sy Tacher. Ary nanana vokatra fantatray izahay. Androany, ny fanontaniana na dia ho an'i Shina aza dia mety haharitra ela ny fahalalahana ara-toe-karena ara-toekarena raha tsy misy fahalalahana ara-politika sy demokratika?
5- Ny soatoavina iraisampirenena, ny soatoavina izay hany fanamarihana, dia tsy ny imperialisma.
"Sokafy (ho an'ny maha-olombelona) ny Fanjakan'ny Fahazavana! Hoy ny andriamanitra Thoth. Nolazainay tany an-kafa fa ny olombelona dia eo ambanin'ny fampahoriana ny filàna. (4) Ny fahafaham-po ilaina amin'ny ankapobeny dia mandrindra ny fikambanana ara-piarahamonina sosialy. Avy amin'io fikambanana io no manasaraka ny fizarana ny asa sy ny fitsipi-pifehezana. Ny famaizana dia mitaky fahefana izay manaitra sy mitarika azy. Ny fahombiazan'ity fahefana ity dia azo atao raha toa ka misy fanamby ary ampitahaina amin'ny zavatra hafa azo atao. Miresaka amin'izao fotoana izao ny hery sy ny fahafahana ara-drariny ho an'ny mpilalao tsirairay mba hahazoana izany amin'ny voninahitra. Izany no Demokrasia. Izany dia fitaomam-panahy manerantany. Ary milaza ny tsy mahatakatra fa tokony hoterena hanao izany. Ity ny kabarin'i Mitterrand tao La Baule. Tokony hanorina amin'ny fitiavana sy hatsaran-tarehy ireo andrim-panjakana izay manandratra ny fiainana demôkratika. Ity no fikasan'ny repoblika an'i Platon. Vitsy ny adihevitra, niampanga an'i Banda Kani fa demokraty izay namono an'i Socrates. Azo atao, saingy ankehitriny dia tsy misy fiaraha-monina demokratika mifaninana amin'ny demokrasia hafa eto amin'izao tontolo izao, dia afaka mamono ny Savants. Tsy fiampangana amin'izao fotoana izao izany.
Ny ezaky ny governemanta Amerikana amin'ny demokrasia dia mikendry ny tsara indrindra amin'ny maha-olombelona. Mieritreritra ny anjara andraikitry ny Peace Corps aho, ny hetsika nataon'ny Progress Volunteers ary koa ny ezaka ataon'ny USAID. Ny Amerikanina dia manome DVD maimaim-poana amin'ny boky 1000 izay manazava ny fizotran'ny teknolojia samihafa. Ny oniversite sarobidy indrindra amin'ny Amerikana dia manome aterineto maimaim-poana amin'ny aterineto. Misy ny ahiahin'ny fikambanana amerikana manampy amin'ny fanitarana ny sehatry ny demokrasia eto amin'ny firenentsika, avy amin'ny CIA. Tsy manana porofo aho. Ny fiainana demôkratika dia mila mpanentana sy mpanakorontana hevitra. Vita ihany izy ireo fa misy any an-kafa, raha tsy manome alalana azy ny fanjakana.
Tsy maintsy maniry demokrasia isika. Tokony ho tia demokrasia isika. Tsy maintsy tiantsika ny andrim-panjakana izay mamaritra ny fiainana demaokratika ao amin'ny firenentsika ho tsara tarehy kokoa noho ireo andrim-panjakana amerikanina. Fikambanana ara-tsosialy demokratika toy ny an'ny Etazonia, izay namorona ny fahitalavitra, ny Internet, ny ordinatera, ny mpanonta, ny robotics, ny satelita ... dia tsy maintsy averina averina tsy misy fanavakavahana. Ao amin'ny Silicon Valley in fitepon'ny fony Avy amin'i Barack Obama, dia nitarika ny olona Fampianarana 6000 any Afrika Atsinanana mba ho azo atao ny mety hisian'ny famoronana rehetra izao fidiram-bola ho an'ny olombelona rehetra, ary mamono sy ny fahantrana eo amin'izao tontolo izao. Banda kani milaza fa tsy manana fifidianana malalaka any Andrefana izy. Milaza izany izy satria fantany fa tsy mety afa-po amin'ny mpijery Afrikana izy, afaka mampiasa lainga izy. Te hanao izay tiany izy amin'ny fanaovana ny feon'ny fieritreretana mampihomehy amin'ny tanora Afrikana. Tsy nety nilaza izy fa raha misy fifandonana 100 / 100 any Afrika, ity percentage ao Eoropa ity dia akaiky ny 1 amin'ny 1000. Izy dia miresaka momba ny teôlôjian'ny rohy malemy izay tsy hitranga any amin'ny tontolo iray izay ahafahan'ny olona iray ao amin'ny folo Amerikanina manitsy manoratra izao tontolo izao ary mahafantatra ny fomba handrosoana amin'ny hoavy. Ankoatra izay, raha mandao an'i Etazonia isika dia mahita fa ao Tokyo ihany irery no mividy amin'ny 6 volana, bokim-boky isan-karazany mihoatra ny any amin'ny firenena Afrikana amin'ny herintaona. Tsy ampy ho an'ireo nosy Afrikana ny miantso sy manambara an'Andriamanitra sy ny (teny ratsy) voarakitra ao amin'ny Baiboly na ny Kôrana, hany boky novakiana tany Afrika. Izany no fahadisoana nataon'i Gbagbo sy ny manodidina ny pasitera. Ny fisalasalana ara-politika sy ara-toekarena an'i Afrika dia ambony noho ny manam-pahaizana. Tsy misy fahagagana amin'ny politika. Nandritra ny tetikasan-dalan'i Reagan, dia nipongatra ny USSR satria novonoin'i Stalin ny mpandinika rehetra tao amin'ny Union. Tsy mahomby i Afrika satria ny asa momba ny asa dia ny andriamanitry ny mpampianatra sy ny mpitarika anay. Ny andriamanitry ny mpanao politika dia manana loha telo, ny fikomiana, ny kleptomania ary ny fandavana ny vahoaka. Ireo andriamanitra ireo dia mpivady andriamanibavy tokana izay mahery kokoa: buffoonery. Izany dia manazava ny antony nahatonga ny governemanta-ekonomika-ara-toekarena mafia tany Andrefana mora foana ny fanonganam-panjakana teto amin'ny firenentsika, ny fikomiana ary ny famonoana olona mihitsy aza rehefa nanampy azy ireo izany. Niova ve izahay hatramin'ny andro nivarotanay ny tanindrazanay ho andevo? Ny porofo efa niova dia tsy ampy. Ny fanjakana postcolonial, amin'ny fanakatonana ny demokrasia, dia tsy nahatsapa ny anjara toerany eo amin'ny sehatra sosialy sy ny fitondrantenany.
Demokraty iray dia mankahaka ny heriny amin'ny alalan'ny fametahana, ny hosoka na ny kolikoly. Demokraty iray dia mankahala ny mijanona amin'ny fahefana amin'ny alalan'ny fametahana, ny hosoka na ny kolikoly. Demokraty iray dia mankahala ny mijanona eo amin'ny fitondrana mandritra ny taona 10. Tsy hoe satria any amin'ny firenena sasany ihany no ahitantsika fa tsy tokony hizara ireo hevitra ireo ny Afrikana. "Tsy maintsy," hoy i God Thoth, "hoy ny faniriana ho amin'ny fahalavorariana satria izany no fomba hahatratrarana ny tanjona. Tokony ho fantatrao fa tsy misy zavatra tonga lafatra ary tsy maintsy manao izany ho tadiavinao sy ny tanjonao ianao. Ireo Afrikana tranainy dia taona maro tsy hay resahan'ireo mpiara-belona amintsika amin'izao fotoana izao.
Nolazaina izahay fa Amerikana dia mahery setra. Tsy manadino ny milaza fa, raha nataony tao parenthesis ny fivarotana andevo sy ny Arabo fanafihana, ny post-fanjanahana Afrika nahafaty Afrikana kokoa noho ny nanjanaka ary ankehitriny mbola mitohy ny famonoana. Raha toa ny filoha izay milaza ireo mpanao gazety nisotro ny ran'ny ny olona ka hihinana ny nofony, teo am-lohan'ny hiringiriny-Amerika mahery, izao tontolo izao dia ho ratsy kokoa. Raha Banda Kani milalao anti-imperialista populism, efa ho 300 Shinoa mpitsikilo Rosiana sy ara-teknika isan'andro manidina sy ny teknolojia vaovao eo amin'ny indostria sy ny US foibem-pikarohana ho an'ny tombontsoan'ny ny toekarena ny taniny. Ny Chinese 3000 dia mianatra any Etazonia amin'ny fandaniana ny governemanta Shinoa. Fantatry ny Rosiana sy ny Shinoa ny tombontsoany ary tsy manahaka azy ireo isika. Senghor dia mety ho hita amin'ny fiantsoana ny tsy fahamarinana ara-pihetseham-po sy tsy mendrika. Tsy hoe manampy ny tanora izay mamafy ao an-tsainy ny voan'ny antipathy ho an'ity firenena demokratika, izay manampy be dia be ny fivoarana sy ny fiadanan 'izao tontolo izao. Miady an-tanety any Eoropa sy any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana ny Amerikana noho ny adin'izao tontolo izao izay tsy nahatonga azy ireo. Izy ireo dia tonga nanavotra ny zanak'olo-mpiray tam-po, ny teny anglisy. Any Japon izy ireo no voalohany amin'ireo niharam-boina tamin'ny Japoney. Any Korea Atsimo izy ireo hanakanana ny loza ateraky ny loza ateraky ny Shina sy Korea Avaratra. Nanasazy an'i Saddam Hussein izy ireo tamin'ny fanandramana ny fanesoana nandritra ny fanafihana tamin'ny 11 2001. Any Afrika dia tsy miala amin'ny mpifanandrina rehetra aminy izy ireo, any amin'ny kontinanta malemy. Ny tsy fahombiazan'i Gaddafi dia avy amin'ny fanentanam-bolany tena mendri-piderana. Miaraka amin'ny tetikasany ho an'ny Tahirim-bola Afrikana Afrikana, dia nandrahona ny hanafaka an'i Afrika avy amin'ny masoivohom-pirenena Frantsay izy amin'ny fanaraha-maso ara-bola ny tahiry Frantsay. Tokony ho azony fa raha ny lojikan'ny gangsters, Sarkozy dia handoa ny volavolan-dalàna any Libya, Etazonia ho an'ny fiverenan'i Frantsa ao amin'ny OTAN. Miteny ao Washington izy fa ny teknolojia ara-miaramila alemana dia afaka mahatonga an'i Rosia tsy hay resena amin'ny fifandonana mivantana. Fa raha tsy misy izany, dia mampidi-doza an'i Frantsa noho ny akaiky an'i Alemaina. Ao ihany koa ny zava-misy momba ny "lalao amerikana". Tany Libia, i Amerika dia tsy nanana safidy afa-tsy ny hanohana an'i Sarkozy amin'ny hadalany. Ny fahitana ny Pentagon, ny fahadisoana dia mitoetra amin'ny Shinoa sy ny Rosiana izay tsy manome antoka ny fiadanana manerantany. Ireo rafitra demaokratika dia tsy azo itokisana. Liberian Charles Taylor tsy nisalasala nandao ny fahefana rehefa nanontany azy i Bush. Tokony nanao toy izany koa i Gaddafi rehefa nanontany azy i Obama.
Ny fahatanterahana dia eo amin'ny lamina demokratika ka mahatonga ny fanavaozana ara-tsosialy rehetra azo atao.
6 - Tsy misy na inona na inona hamerenana satria ny siansa iraisan'izao tontolo izao ankehitriny dia ny faritry ny Siansa Afrikana fahizay nesorina tamin'ny harena maizina.
Ny lafiny maizina amin'ny siansa afrikana dia tsy tokony hitsiriritra satria tsy hahazo na inona na inona isika. Ny olana rehetra apetraka amin'ny Afrikana indray dia voavahan'ny razambenay egyptiana ary amin'ny kely kokoa, ny Nubians. Ny siansa politika, diplaomatika ary ara-tsosialy rehetra dia hita ao amin'ireo angano Aesopeana. Mikasika ny filozofia, ny angano dia manome ampy na dia eo aza ny fandrobana sy ny fikororohana kinova sasany amin'ny fiteny grika nadika tamin'ny teny frantsay na anglisy izay tonga teto amintsika.
Ao amin'ny haino aman-jery, toa i Tayou Kamgain no milaza fa any Andrefana, ny hevitra siantifika dia avy amin'ny fisaratsarahana, avy amin'ny tsirairay. Raha any Afrika, ny siansa dia momba ny fahasarotana, ny vondrona ary ny olona dia tsy manisa. Mety ho marina i Tayou, tsy mieritreritra an'izany aho. Tsy misy ny filazam-baovao ara-tsosialy izay manosika ny filazany. Ankoatra ny mpanao gazety nandritra ny fampitana amin'ny Juliana Tadda, ny fanontaniana momba ny Afrikana siansa, Tayou dodged ny valiny amin'ny alalan'ny filazana ny fahombiazana nandritra ny fetin'ny lamaody afrikana dia nampianatra tao amin'ny Anta Diop Cheik Institute. Amin'ny maha-mpihaino ahy ahy dia hitako fa ilay mpanao gazety sahiran-tsaina dia nanam-bintana tsy handeha lavitra kokoa amin'ny fanontaniana amin'ity karazana ity. Raha mandinika ireo vondrona ny vehivavy izay tonga miaraka hifindra avy ny saha amin'ny saha ny mpikambana ao amin'ny fotoam-miasa tany, voa sy amin'ny taom-pijinjana, misy ny vokatry ny fijinjana dia niverina foana ny mpikambana handeha ny tompon- an-tsaha. Mino aho fa Tayou dia mahatoky mpamaky ireo karazana Afrikana mpanoratra izay fahatsiarovana ny threaded amin'ny alalan'ny taona maro ny fanandevozana sy ny fanjanahantany nijaly noho ny olona. Mihevitra ireo lehilahy ireo fa afaka manova zavatra izy ireo, manampy amin'ny fikajiana fiheverana miandry eo amin'ny tanora. Inona no hevitr'iza no azontsika omena ny fahasarotana sy ny endriky ny fanoheran'i Tayou? Ny angano ao Osiris dia mamaly mendrika.
"Geb, andriamanitry ny Tany, ary Nut, andriamanibavin'ny lanitra, dia nanan-janaka roa lahy i Osiris sy i Seth, ary roa vavy, Isis sy Nephtys. Nanambady an'i Isis sy Seth ho vadin'i Nephthys i Osiris. Osiris nanjaka tany Ejipta. Seth fialonana, te hamono azy: Seth dia nanao tratra mba handrefesana ny vatan'i Osiris, dia nentiny tao amin'ny fanasana. Nanambara izy fa homeny ilay iray izay mandry ao, hameno azy tsara. Rehefa nipetraka teo i Osiris, dia noraisin'i Seth haingana ilay fiaramanidina, nanindrona azy ary natsipiny tany an-dranomasina. Tezitra i Isis, ka nitady azy tany Fenisia. Nahita ilay vatam-paty izy ary nitondra azy niverina tany Egypta. Saingy nahavita naka ny vatany i Seth ary nanapaka izany ho efatra ambin'ny folo izay niparitaka. Nangonin'i Isis ny rantsambatan'ny vady navelany, nanangana indray ny vatana tamin'ny fanampian'i Anubis andriamanjaka, nanangom-bolo azy ary nahavita namelona azy indray. Hatramin'izany andro izany dia nanjaka nanerana ny fanjakan'ny maty i Osiris. Tatỳ aoriana, i Horus, zanak'i Osiris, dia nanameloka ny rainy: novonoiny i Seta ary lasa i Faraôna. Ao amin'ny fanoharana dia misy ny zavatra lazain'ny olona sy ny zavatra fantatry ny pretra. Heveriko fa ny fahendren'ny mpamaky ahy dia ampy hamaranana ahy fa ny Osiris Myth no fitantaran'ny Ejipsiana momba ny fiainana manerantany ho an'ny tontolo, izao tontolo izao, ary ny olombelona. Raha tsy izany, dia tsy ho takany ireto manaraka ireto. Geb and Nut dia maneho ny toetry ny tsy manam-petra, ny mandrakizay ary ny tsy misy. Ny Infinity dia manana lafiny roa, toerana tsy misy fetra (ged) ary ny fihetsiketsehana mandrakizay na ny fofon'aina masina (nut). Afaka miantso an'i Ged Primal Immaculate Matter sy Nut Ny Fanahy Ara-panahy Ara-panahy. Mba hahatonga izao tontolo izao sy izao tontolo izao, dia ny Fanahy-Matter na Ged-Nout dia samy hafa amin'ny fiaramanidina avo indrindra manoloana ny fiaramanidina midadasika kokoa. Taorian'ny nahaterahan'i Osiris, Isis, Seth, Nephtys izay manana metafysika lehibe eo amin'izao tontolo izao sy tontolo manerantany ary manan-danja. Tao anatin'ity taranaka ity dia nanjary lasa faritra 14 i Osiris, ary avy eo dia nanome azy fiainana i Isis. Eto isika dia mahita ny fahaiza-misaina hanasongadinana ny zava-drehetra sy ny fahasamihafan'ny zavatra (Isis) amin'ity modely ity amin'ny zavatra rehetra mba hamela ny fanehoana ny fanahy tsy mitovy (Osiris). Seth no hery manimba manimba izay mamela ny zava-drehetra (Isis hita) mba hamerenana indray. Seth no fanehoana ny lavaka mainty rehetra, ireo rava sy fahafatesana, izay mamela ny fiverenana tsy ankiato universer, mondes ary ny olona. Horus no Monad Osiris-Isis (Fanahy-zavatra) tonga ny alalan 'ny evolisiona, ny olombelona sy ny sehatra tsy maintsy hainareo ny hiverina any amin'ny fanjakan'ny rainy Osiris (ny maha-Andriamanitra ho Andriamanitra). Ary izany dia amin'ny fanampian'ny fahendrena (Thoth). Ankoatra izany, ny Osiris-Horus-Isis, andriambavilanitra Ejiptiana, dia mamerina mijery ny firaisana ara-tsiansa-mampiavaka ny mpahay siansa maoderina. Ny fitoviana no toetra voajanahary sy zavatra. Mba hahatonga azy ho zavatra hafa, ny fahasarotana dia tsy maintsy sokarena ary novolavolaina ho singa tsotra izay ilaina ho an'ny zavatra heverina, zava-manahirana vaovao. Afaka mieritreritra akanjo iray ohatra isika miaraka amin'ny fibre, ny lokony, sns. izay singa tsotra rehetra fa izay, amin'ny farany, dia lasa zavatra, antokon'olona iray. Izany no mahatonga ny natiora. Izany no nataon'ireo mpahay simia sy mpanao mekanika tany Ejipta fahiny, ary izany no siansa ankehitriny.
Raha miteny Andriamanitra Thoth hoe: "mamorona fivavahana (orinasa, fianakaviana, fikambanana)", dia tsy miresaka amina vondrona iray izy. Tsy miresaka amin'ny vondron'olona iray Izy. Miresaka amintsika tsirairay izy, nalaina tsirairay. Tsy afaka milaza ny teoria siantifikan'ireo mpampianatra azy i Tayou satria diso ny toerana niavian'izy ireo ary noho izany dia mifanohitra amin'ny fisainany.
Ho famaranana, The New tetikasa Pharaonic nampita ny Thoth-Hermes Trismegistus Institute zavaboary, dia mikendry ny hampiroborobo isaky ny firenena Afrikana tokony mandika (5) amin'ny nomena sehatra, Siantifika fotodrafitrasa, teknolojia, ara-bola sy ny orinasa, ny Alemaina. Izany, mba hanangana ny fototra ara-teknika, siantifika, teknolojika sy orinasa anjara amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana izay Federaly na Afrika afaka manorina orinasa fanakanana miaramila sy hanao amin'ny tapa-kevitra eny amin'ny habakabaka. Toerana no fototry ny piramida. (6) (7) Ny ho avintsika ny habaka. Ireo rehetra ireo piramida kely hitantsika na aiza na aiza ao amin'ny firenena tsy hita ivelan'ny ny kaontinanta, dia History World ny ezaka mba hahazoana ny halehiben'ny Fahiny Ejipta. (8) Noho izany, ny teny ofisialy sy ny mpanohitra ny Afrikana vaovao, ireo milaza fa tsy handika ny siansa tandrefana. Ny jiro demaokratika amin'ireo Afrikanina Vaovao no lova navelan'ny rehetra.
(1) Nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany tao Chad, ny Filoha Deby dia nandray anjara tamin'ny fanohanan'ny antoko politika sy fikambanana 111. Hanambara ny zava-nitranga raha toa ka hampiroborobo ny zava-misy demaokrasia ao Chad io fitsaboana ao Deby io
(2) Nandritra ny fitsidihany voalohany an'i Frantsa, ny filoham-pirenena Beniniana vaovao Patrice Talom dia naneho ny filàny an'i Paris hanangana ny firenena amin'ny rafitra ilainy. Ireo mpanohitra azy dia nilaza fa raha tsy misy ny fanampian'i Paris, ny Beninese Services dia afaka mamerina amin'ny tontolon'ny fahaiza-manao ka mila ny fitomboany i Bénin
(3) Mahaliana ny fitondrana kilasy ho an'ny olona avy amin'ny karazana Eoropa, toa tena mahatonga ny ara-politika tsy nety hanangana endogenous fandraisana safidy teo amin'ny fifaninanana eran-indostria. Mahavariana tokoa io fientanam-po any Angola io, izay ahazoana tombontsoa manokana sy fifaninanana amin'ny teratany, ny mpandraharaha portiogey dia aleony. Amin'izao fotoana izao dia mandinika fa Angole zanakavavin'ny olona antonontonony amny'ny mpia kilasy ady mba hahazo amin'ny mpivady amin'ny Eoropeana hafa karazana rehetra tanora tsy an'asa Angoley, dia kilasy ara-tsosialy. Toa ahy fa ny fanesorana ny Black amin'ny asan'ny natiora dia voasoratra ao amin'ny fototarazan'ny mpitondra ambony ao Afrika. Raha manao loha laharana ireo zava-misy ao amin'ny mifanitsy amin'i Ejipta Fahiny araka ny fanorenana ny Sphinx sy ny Piramidan'i, ny hitandremantsika Mahaliana koa fa ho an'ireo niantso indray izahay tatỳ aoriana Eoropeana, dia haingana miscegenation tany Ejipta. Io fihetsika io indray no nanamora ny fibodoana grika. Nitarika ho amin'ny fanjanahantany ny Romana izay taorian'izay ny fandoroana ny trano famakiam-boky tany Aleksandria sy ny fandrobana ny soratra masina sy ny asan'ny maizina amin'ny tempoly ejipsianina. Angamba ny sivilizasiona goavambe narahin'ireo fara tampony namita ny asa nanirahana azy, dia efa nitady ny tsy handevozina. Tsy izany no zava-misy ankehitriny. Ny iray dia mahatsapa fa i Afrika dia adala sy manimba ary manameloka ny tenany.
(5) "Tahaka ny fiarahamonintsika moderina izay manohitra ny fahatsiarovana ny fahagola amin'ny dingana rehetra, tahaka ny naka tahaka an'i Homer sy Virgil, i Sophocy sy i Euripides, i Plautus ary i Terence, tahaka ireo filozofianay, an'i Pythagoras, Plato ary Aristotle, izay raisin'ireo mpahay tantara antsika Livy, Sallust na Tacitus ho maodely, ireo mpandahateny, Demosthenes na Cicero; fa ny mpitsabo anay dia mbola mianatra Hippocrates ihany, ary ny kaody ataonay dia mandika ny Justinian. Toy izany koa, ny fahagola dia nanana fahagola ihany koa izay nianarany, nanahaka ary narahiny. Inona no mety ho tsotra sy mirindra kokoa? Aza mifanalavitra ny olona rehetra. Moa ve ny fahalalana resin'ny firenena iray mangirifiry amin'ny fari-taniny ary maty miaraka amin'ilay taranaka nahazo azy? »Jacolliot, ao amin'ny The Bible in India nalaina tamin'ny Isis naseho
(6) "Izy io dia tandindon'ny fitsipiky ny famoronana natiora, ary izy io koa dia natao sary ho an'ny fitsipiky ny haitao, matematika, fanandroana ary astronomia. Tao anatiny dia tempoly goavambe iray izy io, ary ny fisotronany maizina dia tanteraka ny zava-miafina, ary ny rindrina dia nanatri-maso ny lanonana fanombohana nataon'ny fianakavian'ny mpanjaka. Ny sarcophagus porphyry izay nidina tamin'ny andraikitra tsy dia lehibe an'ny tratran'ny varimbazaha ny profesora Piazzi Smyth, dia ny vatam-batemy, avy eo, rehefa lasa, ny neophyte dia "nateraka indray" ary tonga mpanaraka. ". (Isis naseho)
(7) "Ny iray amin'ny Book of Hermes dia mamaritra ny sasany amin'ireo piramida ireo, raha miakatra eny amoron'ny ranomasina," izay ny onjany dia manapaka ny fahavinirany foana amin'ny fotony ". Midika izany fa novaina ireo drafitra ara-jeografika ao amin'ny faritra, ary mety hanondro fa tsy maintsy ampiasaintsika ireo "tranom-borona" taloha ireo, "mpandinika an-tsokosoko", ary "fasana mpanjaka", niandohana talohan'ny niforonan'ny Sahara sy avy any an'efitra hafa. Midika izany fa fahagola iray ambony noho ny an'arivony taona vitsivitsy, nomen'ny Egyptologists tamim-pahalalahan-tanana ”. (Isis naseho)
(8) "Ny niandohan'ny kolotsaina Ophic sy Heliolate, ny endrika tsangambato conical sy obelisks, dia tokony hiverina any amin'ny Hermes Trismegistus Egypte. Aiza no tokony hitadiavantsika izany fampahalalana izany raha tsy ao amin'ireo boky Hermetika? Azo inoana ve fa ny mpanoratra maoderina dia mahalala bebe kokoa, na betsaka aza, momba ny angano taloha sy ny cultes taloha hatramin'ny taloha izay nampianatra azy ireo ny mpiara-belona taminy? Mazava ho azy fa zavatra roa no ilaina: ny voalohany, ny fitadiavana ireo Bokin'i Hermès izay tsy hita; ary ny faharoa manana ny lakilen'ny fahatakarana azy ireo, satria tsy ampy ny mamaky azy ireo. Raha tsy misy an'izany dia mihena ny vinavinam-bitsika amin'ny siantifika, toy ny, noho ny antony iray hafa, mandany ny fotoanany amin'ny fikarohana tsy misy fotony ireo loharanon'ny reniranon'i Neily. Raha ny marina, i Egypt dia fialokalofan'ny mistery. Tsy nijanona niady hevitra raha Hermesy no "Printsin'ny majika taorian'ny safo-drano", araka ny fiantsoan'ny Des Mousseaux azy, na ny fitsipiky ny majia antediluvian, izay toa azo inoana kokoa, zavatra iray no azo antoka: ny maha-azo itokiana, ny maha-marina sy mahasoa ny bokin'i Hermes - na ny sisa tavela amin'ireo boky roa amby efapolo natolotry ny ombiasy egyptiana, izay eken'i Champollion zandriny indrindra ary nohamafisin'i Champollion-Figéac izay miresaka azy ireo. »(HP Blavatsky, ao Isis naseho).
Ireo boky nampiasaina
Tantara momba ny eritreritra liberaly any Etazonia, nataon'i Louis Hartz. New Horizons, mpitory.
Barry Goldwater: Fahalalahan-tànana ny talen'ny Flightplan: Stephen Shadegg
Ny fotopampianarana miafina, nataon'i HP Blavatsky
Tetika roa amin'ny revolisiona manohitra, Lenin
Tsy siansa rocket (horonan-tsary)
Mihaino ny fantsonanao - Sonia Choquette (Audio)
Ny tantaran'ny vehivavy Afrikana iray dia voatery nampiseho ny foto-bolo lehibe
Ny hatsaram-panahy amin'ny kombucha, ny elixir amin'ny tsy fahafatesana
Ny lalan'ny fanombohana 2